Ryan Giggs Oo Daboolka Ka Qaaday Tirada Saxeexyada Ay
Halyeyga Manchester United ee Ryan Giggs ayaa tababare Ole Gunnar Solskjaer u sheegay tirada ciyaartoyda uu u baahan yahay inuu lasoo saxeexdo xagaagan, si uu xili ciyaareedka dambe horyaalka ugula dagaallami karo Liverpool iyo Man City.
United ayaa xalay sii kordhisay rikoodhka kulamada aan laga badin oo ay gaadhsiisay 19, kaddib ay 2-0 ku garaacday Crystal Palace Khamiistii, iyadoo ay Anthony Martial iyo Marcus Rashford goolasha u dhaliyeen.
Manchester United ayaa intii ay ciyaaruhu dib u bilaabeen, isla markaana ay usoo laabteen Rashford iyo Pogba oo dhaawac kaga maqnaa iyo Bruno Fernandes oo kooxda kusoo biiray waqtigii ay dhaawaca u jiifeen, ayaa wacdaro ka dhigaysa Premier League, waxaana inkasta oo ay kulamada qaarkood barbarraysay aan dhinacooda dhulka la dhigin 19kii ciyaarood ee ugu dambeeyey.
Laakiin waxay u baahan yihiin inay labada ciyaarood ee ugu dambeeya horyaalka ku guuleystaan, si ay afarta sare uga mid noqon karaan oo ay Champions League xili ciyaareedka dambe boos ugu yeeshaan.
Ryan Giggs oo guushii Red Devils ee Khamiistii ka hadlayay telefishanka ayaa sheegay in kooxdiisa hore ay wali diciif tahay, laakiin haddii ay saddex ciyaartoy oo kaliya lasoo saxeexdaan ay soo qaban doonaan Liverpool iyo Manchester City, waxaanu yidhi: “Dhab ahaantii, wali waxaan u malaynayaa inaanu ka hoosayno Manchester City iyo Liverpool.
“Wali waxay ila tahay in laba ama saddex ciyaartoy oo kale loo baahan yahay. Ole wax fiican ayuu sameeyey labadii suuq ee uu kooxda joogay, waxaana yimid hab-dhaqankii kooxda.”
Bruno Fernandes oo khadka dhexe qabsaday, kana daboolay meelihii ay ka liigayeen iyo Harry Maguire ayaa ah labada saxeex ee ugu waaweyn ee uu sameeyey Solskjaer, waxaana u raaca Aaron Wan-Bissaka oo baasha midig ee diciifka ahayd ka dhigay meel xooggan oo aanay cidina kusoo hamiyin inay kasoo weerarto goolka United, waxaana taas qiray Ryan Giggs, waxaanu yidhi: “Waxay ku socdaan dariiqii saxda ahaa, laakiin waxaan aaminsanahay inay wali u baahan yihiin saddex ciyaartoy oo kale.”